Klout Scores Reinvented ... ary tiako io! | Martech Zone
Klout Scores Reinvented… ary tiako ity!
Efa naheno momba izany aho Klout fotoana vitsy lasa izay saingy tsy dia niraharaha firy aho mandra-pihaonako ny ekipa Klout any Las Vegas. Notsapaiko izany ary hitako fa tsy ampy ny isa sasany. Ohatra, maro amintsika no manana pejy marobe, kaonty marobe, ary tantara an-tserasera izay naharitra am-polony taona… saingy tsy nisy fiantraikany tamin'izany i Klout.
Ny fotoana farany nanavaozan'i Klout ny isa dia very ahy tanteraka izy ireo. Nisy fiatraikany mivantana tamin'ny isa farany ny isa… na dia betsaka noho ny teo aza. Ny tanjaky ny diako dia tsy nampianatra ahy na inona na inona momba ny fifandraisana ara-tsosialy. Tsy nijery intsony aho.
Klout vao avy nahavita fanavaozana lehibe ny isa ary nilalao azy hatramin'ny nanombohany. Nijery ireo influencers aho, nanara-maso ny tambajotranoko, ary nampiasa ny fampiharana finday Klout isan'andro (somary mampiankin-doha… alao izany). Ny endri-javatra mahafinaritra iray amin'ny rindranasa finday dia ny ahafahanao mampiseho izany isa izany ho isa fampandrenesana ao amin'ilay rindrambaiko. Tsy mila manokatra ny app akory ianao vao hahita ny naotinao!
Iray amin'ireo endrika tiako indrindra ny zava-mitranga rehefa manindry ny mombamomba ahy aho. Ny pejy mavitrika dia mamokatra sary mahafinaritra mampiseho ny toerana tokony hifandraisako amin'ny influencer, amin'ny lohahevitra inona, ary ny mahita hoe iza no influencons iraisanay. Mahafinaritra izany ho an'ny mpivarotra rehetra…. ny fahaizana mikaroka amin'ny lohahevitra na influencer, ary mahatakatra ny toerana sy ny fomba ifandraisan'izany influencer dia tombony lehibe amin'ny fanitarana ny tratranao.
Mbola tiako ny hahita an'i Klout manome toro-hevitra vitsivitsy ao amin'ny fomban-dry Klout. Na dia mankasitraka ny anarana voatondro ho Thought Leader aza aho, te-hahita toro-hevitra na fomba fanao tsara indrindra hanampiana ahy hahay handanjalanja kokoa amin'ny fomba fampiasa amin'ny tambajotra sosialy… angamba fizarana sy fandraisana anjara bebe kokoa Tsy te-hijirika ny naotiko Klout aho, saingy tiako ho fantatra raha afaka manitsy ny fihetsiko aho ary asaivo milaza amiko i Klout na mandeha na tsia.
Ity ny lahatsarin'i Klout amin'ny isa vaovao… ary topi-maso ny Klout Moments izay manomboka tsy ho ela:
Ny isa Klout amin'izao fotoana izao mampiditra signal 400 mahery avy amin'ny tambajotra fito samy hafa ary zahana isan'andro hanavao ny Score anao.
milaza: Ny fanonona ny anaranao amin'ny lahatsoratra iray dia manondro ezaka iray hifandraisana aminao mivantana.
tia: Ny hetsika tsotra indrindra mampiseho ny firotsahana amin'ny atiny noforoninao.
Comments: Ho fanehoan-kevitra amin'ny atiny zarainao, ny fanehoan-kevitra dia mampiseho taratra ny fidirana mivantana avy amin'ny tambajotrao koa.
mpanjifa: Ny fanisana mpanjifa dia refin-kery maharitra izay mitombo rehefa mandeha ny fotoana.
Paositra rindrina: Ny lahatsoratra eo amin'ny rindrinao dia manondro ny fitaomana sy ny firotsahana.
Friends: Ny isan'ny namana dia mandrefy ny tratran'ny tambajotrao nefa tsy manandanja loatra noho ny fifandraisan'ny tamba-jotra miaraka amin'ny atiny.
retweets: Mampitombo ny fitaomanao ny retweets amin'ny alàlan'ny fampiharihariana ireo atiny amin'ireo tambajotra mpanaraka.
milaza: Ny olona mitady ny sainao amin'ny filazany anao dia famantarana lehibe amin'ny fitaomana. Raisinay ihany koa ny tsy fitovizan'ny karazana voalaza, ao anatin'izany ny "via" sy "cc".
Tanisao ny maha-mpikambana: Ny fampidirana anao ao anaty lisitra notontosain'ny mpampiasa hafa dia mampiseho ny faritra misy anao manan-kery.
Followers: Ny fanisana mpanaraka dia singa iray amin'ny Scoreo, saingy tianay kokoa ny fandraisana anjara noho ny haben'ny mpijery.
namaly: Ny valiny dia mampiseho fa mampifandray ny tambajotrao foana ianao amin'ny atiny kalitao.
+ 1's: Ny hetsika tsotra indrindra mampiseho ny firotsahana amin'ny atiny noforoninao.
fizarana manaraka: Mampitombo ny fitaomanao ny famoahana azy amin'ny alàlan'ny fampiharihariana ireo atiny amin'ireo tambajotram-pivelarana ao amin'ny Google+.
Title: Ny lohateny nolazainao tao amin'ny LinkedIn dia famantarana ny fitaomana anao amin'ny tontolo tena izy ary maharitra.
fifandraisana: Ny tabilao fampifandraisanao dia manampy amin'ny fanamarinana ny fitaomana anao amin'ny tontolo tena izy.
Mpanolo-tsaina: Ireo mpamporisika ao amin'ny tambajotranao dia manampy famantarana fanampiny ho an'ny fandraisana anjara omen'ny LinkedIn ny Score anao.
Torohevitra vita: Ny isan'ny tolo-kevitra tavelao izay vita dia manondro ny fahaizanao mitaona ny hafa amin'ny efamira efatra.
+ K voaray: Ny fahazoana + K dia mampitombo ny Score Klout anao amin'ny isa voafetra isaky ny tsingerina fandrefesana 90 andro mba hiarovana ny fahamendrehan'ny isa.
Zava-dehibe ny pejy: Refesina amin'ny alàlan'ny fametrahana algorithm PageRank mifanohitra amin'ny kisary pejy Wikipedia.
Mampiditra rohy mankany ivelan'ny rohy: Mampitaha ny isan'ny rohy miditra mankany amin'ny pejy amin'ny isan'ny rohy mankany ivelany.
Isan'ny rohy miditra: Mandrefy ny isan'ny rohy miditra mankamin'ny pejy iray.
Kudos ho an'i Klout tamin'ny famerenany indray ny tenany… lasibatry ny media sosialy nandritra ny taona maro izy ireo saingy tiako ny ekipan'izy ireo (fantatra amin'ny anarana hoe Kloutlaws) dia mbola miezaka mamorona fomba fiasa tsotra hahitana sy handrefesana ny fitaomana eo amin'ny Internet.
Tags: ahoana no refesina kloutkloutisa kloutinona ny isa klout
Lisitry ny fialan-tsasatra amin'ny marketing amin'ny 5 Point